Aptọọpụ | January 2020
Kedu ihe mere batrị laptọọlọ anaghị ebuba? Kedu ihe iji mee batrị na nke a ...
Ezi ehihie Batrị ahụ bụ kpam kpam na laptọọpụ ọ bụla (na-enweghị ya, ọ bụ ihe a na-apụghị ichetụ echetụ iji were ngwaọrụ mkpanaka). Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na ọ na - akwụsị ịnweta: na laptọọpụ yiri ka ejikọta ya na netwọk ahụ, na ọnụọgụ ọkụ niile dị na ya na - amụba, Windows adịghị egosipụtakwa njehie ọ bụla (site na ụzọ, n'ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụkwa okwu ahụ Windows nwere ike ghara ịnata batrị, ma ọ bụ akụkọ na "batrị jikọọ, ma ọ bụghị na-akwụ ụgwọ") ... N'isiokwu a anyị ga-ele anya ihe kpatara nke a nwere ike ime na ihe ị ga-eme na nke a.
Laptọọpụ gbanwere ncha ihuenyo ya, na-akpaghị aka
Ezi ụbọchị! N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ajụjụ dị iche iche na-abanye na nchapụta nke laptọọpụ nyochaa. Nke a bụ eziokwu karịsịa banyere akwụkwọ ederede na Integrated Intel HD ndịna-emeputa kaadị (dị nnọọ ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya, karịsịa ebe ọ bụ na ha bụ karịa ọnụ maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ). Ihe kacha mkpa na nsogbu ahụ bụ ihe ndị a: mgbe foto dị na laptọọpụ ahụ dị mfe - ìhè na-abawanye, mgbe ọ na-agba ọchịchịrị - ìhè na-ebelata.
Ebee ka ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Asus na otu esi esi wụnye ha
N'ime otu ntụziaka ndị gara aga, enyere m ozi gbasara otu esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ, ma ọ bụ ihe ọmụma zuru oke. N'ebe a, na ịmatakwu banyere otu ihe ahụ, na-ezo aka na laptọọpụ Asus, ya bụ, ebe ị ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala, na usoro ha kacha mma ịwụnye na nsogbu ndị dị na omume ndị a.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ na-eme mkpọtụ
Ọ bụrụ na ị na-eche eziokwu ahụ na onye nlekota ihe na laptọọpụ na-agbanwe ọsọ ọsọ mgbe ọ na-arụ ọrụ nakwa n'ihi nke a, ọ na - eme mkpọtụ ka ọ ghara iru ala ịrụ ọrụ, na ntuziaka a anyị ga - anwale iji tụlee ihe ị ga - eme iji belata ọkwa ụda ma ọ̄ bụ dị ka ọ dị na mbu, laptọọpụ enweghị ụda nụ.
Otu esi ejikọ kọmpụta na netwọk Wi-Fi. Ntak nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ Wi-Fi na laptọọpụ
Oge dị mma. Taa, Wi-Fi dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla nwere kọmputa (ọbụna ndị na-enye ọrụ, mgbe ị na-ejikọta na Ịntanetị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ịwụnye router Wi-Fi ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-ejikọ naanị PC 1). Dị ka m kwuru, nsogbu kachasị na netwọk n'etiti ndị ọrụ, mgbe ị na-arụ ọrụ na laptọọpụ, jikọọ na netwọk Wi-Fi.
Laptọọpụ kacha mma 2013
Ịhọrọ laptọọpụ kachasị mma nwere ike ịbụ ihe ịma aka, nyere nhọrọ sara mbara nke ụdị dị iche iche, ụdị na nkọwa. Na nyocha a, m ga-anwa ịkwu maka ụlọ laptọọpụ kachasị mma maka afọ 2013 n'ihi nzube dị iche iche, nke ị nwere ike ịzụta ugbu a. Ejiri aha ndị ahụ edepụtara, ọnụahịa nke laptọọpụ na ozi ndị ọzọ ga-egosi.
Laptọọpụ na-egwu egwu ma dị ọkụ na klas abụọ AORUS X7
N'afọ gara aga, edere m banyere laptọọpụ egwuregwu dị egwu, nke dị ọkụ na nke dị mkpa, bụ Razer Blade. Ihe omuma nke ubochi nke afo 2014 bu ihe kariri ihe kariri. Site n'ụzọ, mgbe m dere banyere kaadị vidiyo abụọ, echere m NVidia GeForce GTX 765M, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na kaadi video dị oke.
Ntinye Windows na laptọọpụ HP (+ BIOS setup)
Ezi oge niile! Amaghị m kpọmkwem ma ọ bụ na mberede, ma Windows arụnyere na laptọọpụ, mgbe mgbe (ngwa ngwa na-enweghị isi, mmemme). Ọzọkwa, diski adịghị adaba nke ọma nkewa - otu nkebi na Windows OS (ọ bụghị ịgụta otu "obere" otu maka ndabere).
Otu esi ejikọta elekere abụọ na laptọọpụ / kọmputa (site na cable USB)
Ndewo Echere m na ọtụtụ ndị maara ma nụ na elele anya abụọ (TV) nwere ike jikọọ na laptọọpụ (kọmputa). N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ na-enweghị nyocha nke abụọ: dịka ọmụmaatụ, ndị na-edekọ akụkọ, ndị na-eme ihe nkiri, ndị mmemme, na ihe ọ bụla. Ọfọn, ọ dị mfe ịgụnye, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu ịchọta ihe nkiri n'otu nlekota, ma rụọ ọrụ ahụ nke ọma na nke abụọ :).
Jupụta na laptọọpụ, wụsara: tii, mmiri, soda, biya, wdg. Ihe ị ga-eme?
Ndewo Otu n'ime ihe ndị na-akpatakarị laptọọpụ malfunctions (netbooks) bụ mmiri mmiri wụfuru na ya. Ọtụtụ mgbe, mmiri ndị na-esonụ na-abanye n'ime ihe gbasara ngwaọrụ ahụ: tii, mmiri, soda, biya, kọfị, wdg. N'ọnọdụ, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, iko ọ bụla 200 (ma ọ bụ iko) ebuuru laptọọpụ ga-efesa na ya!
Ichapu laptọọpụ gị na ájá - ụzọ nke abụọ
Ntuziaka ndị gara aga na-edozi otu esi ehichapụ laptọọpụ maka onye na-amaghị akwụkwọ na-amaghị ihe dị iche iche nke kọmputa: ihe niile achọrọ bụ iwepụ azụ (larịị) nke laptọọpụ ma mee ihe ndị dị mkpa iji wepụ ájá. Lee otu esi ehichapụ laptọọpụ - ụzọ maka ndị na-abụghị ọkachamara. Ọ dị mwute, nke a nwere ike ọ gaghị enyere gị aka mgbe niile ịgwọ nsogbu nsogbu ahụ, ihe mgbaàmà nke na-agbanyụ laptọọpụ ahụ mgbe ibu ahụ na-abawanye, mgbe ọ bụla na-akwado ya na ndị ọzọ.
Laptọọpụ gbanwere n'oge egwuregwu ahụ
Laptọọpụ ahụ gbanwere n'oge egwuregwu ahụ. Nsogbu bụ na laptọọpụ gbanwere n'oge usoro egwuregwu ma ọ bụ na ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa - bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ọnụ n'etiti ndị ọrụ kọmputa. Dịka iwu, njedebe nke ngwa laptọọpụ na-aga n'ihu n'ihu, igwe mkpọtụ, ikekwe "nkwụsị".
Laptọọpụ kacha mma maka 2015
M ga-anọgide na ọdịnala na oge a ka m ga-ede banyere ihe kasị mma, na m uche laptọọpụ maka ịzụta na 2015. Ebe ọ bụ na ọtụtụ laptọọpụ kacha mma maka ọnụahịa ahụ anabatawo ọtụtụ ụmụ amaala nkịtị, m na-eme atụmatụ ịmepụta laptọọpụ m dị ka nke a: nke mbụ - n'ezie (kachasị mma) (dị ka m na-eche) maka ngwa dị iche iche: iji ejiji, ịgba egwu, arụmọrụ na-arụ ọrụ, na-enweghị ego .
Otu esi gbasaa batrị ndụ batrị: Atụmatụ bara uru
Ndị na-emepụta batrị laptọọtụ na-adaba na nkwonkwo, na ogologo ndụ ha bụ afọ 2 (site na 300 ruo 800 nkwụ ụgwọ / nkwụsịtụ), nke dị ntakịrị karịa ọrụ ndụ nke laptọọpụ n'onwe ya. Ihe nwere ike imetụta ọganihu nke ndụ batrị na otu esi agbatị ndụ ndụ ya, anyị na-agwa n'okpuru ebe a.
Laptọọpụ gbanwere, gịnị ka m kwesịrị ime?
Echere m na onye ọ bụla na-arụ ọrụ laptọọpụ nwere nsogbu dị otú ahụ na ngwaọrụ ahụ gbanwere n'enweghị ihe mgbochi n'enweghị ọchịchọ gị. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ batrị ahụ nọdụrụ ala ma ịkwadobeghị ya. Site na ụzọ, ụdị ikpe ndị a dị m mgbe m na-egwu egwuregwu ụfọdụ ma na-ahụghị ịdọ aka ná ntị nke usoro ahụ batrị na-agbapụ.
Kedu ka esi ehichapụ laptọọpụ n'ájá n'ụlọ?
Ndewo N'agbanyeghị otú ụlọ gị si dị ọcha, na agbanyeghị, ka oge na-aga, nnukwu ájá na-abanye na kọmputa (laptọọpụ). Site n'oge ruo n'oge, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ - a ga-ehicha ya. Karịsịa, ọ bara uru ịṅa ntị na nke a ma ọ bụrụ na laptọọpụ ahụ aghọwo ihe ntụrụndụ, kpoo ọkụ, mechibido, "belata" ma kwụpụ, wdg.
Otu esi ekesa Wi-Fi site na laptọọpụ na mbadamba, smartphone, kọmputa, wdg.
Ezi ụbọchị niile. Ọ bụla laptọọpụ nke oge a nwere ike ọ bụghị naanị jikọọ na netwọk Wi-Fi, mana nwekwara ike dochie onye router, na-enye gị ohere ịmepụta netwọk dị otú ahụ n'onwe gị! Dị ka ọ dị, ngwaọrụ ndị ọzọ (laptọọpụ, mbadamba, igwe, smartphones) nwere ike ijikọ na netwọk Wi-Fi e kere eke na ịkekọrịta faịlụ n'etiti onwe ha.
Laptọọpụ dị ọkụ
Ihe mere eji arụ ọrụ na laptọọpụ nwere ike ịdị iche iche, site na nchịkọta na usoro jụrụ oyi, na-ejedebe ma ọ bụ ngwanrọ ma ọ bụ ngwanrọ na-emebi microchips maka njikwa na nkesa nke ike n'etiti akụkụ ọ bụla nke sistemụ dị n'ime laptọọpụ. Ihe ga - esi na ya pụta pụkwara iche, otu n'ime nkịtị - laptọọpụ ahụ gbanwere n'oge egwuregwu ahụ.
Laptọọpụ kasị mma na-egwu egwu 2013
Ụnyaahụ, edere m akwụkwọ nyochaa nke laptọọpụ kacha mma nke afọ 2013, ebe, n'etiti ụdị ndị ọzọ, a kọwapụtara laptọọpụ kasị mma maka egwuregwu. Ka o sina dị, ekwenyere m na enweghi nkọwa zuru oke nke laptọọpụ ịgba chaa chaa ma enwere ihe iji gbakwunye. Na nyocha a, anyị ga-emetụ ọ bụghị naanị na laptọọpụ ndị ị nwere ike ịzụta taa, kamakwa otu ihe nlereanya ọzọ, nke ga-apụta n'afọ a, ma eleghị anya ọ ga - abụ onye ndú na - enweghị atụ na "laptọọpụ egwuregwu".
Ndị laptọọpụ iri kachasị ọnụ n'ụwa
N'okpuru ebe a bụ foto nke laptọọpụ kachasị ọnụ ma dị oké ọnụ ahịa n'ụwa. A na-ahazi ụdị dị iche iche n'usoro iwu nke ahịa ha. 10 ebe - 310 000 rubles. Laptọọpụ kasị dịrị nchebe n'ụwa bụ Panasonic Toughbook CF29, nke na-adịghị atụ egwu ihe ijuanya, mmiri, unyi na egwu. - 9 Ebe - 325 000 rub. Laptọọpụ Alienware Area-51M7700 na-enweghị nhazi.
https://termotools.com ig.termotools.com © Aptọọpụ 2020